अन्ततः अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पदबाट राजिनामा दिए - RanaTharu
अन्ततः अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पदबाट राजिनामा दिए
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा शुक्रबारबाट घर फर्किएका छन । सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा लामो समय मन्त्री बन्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खतिवडाले राजीनामा गरेका हुन् ।
खतिवडाले शुक्रबार पदबाट राजिनामा दिएसँगै अर्थ र सञ्चार मान्त्रालयमा पुगेर हार्दिकता पूर्वक विदाइ लिएर निजी निवास धुम्बाराही फर्किए । गत फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि खतिवडाले २०७६ फागुन २१ गते मन्त्रीको रूपमा दोस्रोपटक शपथ लिएका थिए ।
दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खतिवडाले आफूले गरेका कामबारे जानकारी सहित करिब १ घण्टा बिदाइ मन्तव्य दिएका थिए ।
खतिवडा मन्त्रीबाट विदा भएसँगै शुक्रबारबाटै क्वाटर पनि छाडेका छन । अर्थ मान्त्रालयबाट विदाइ हुँदै गर्दा मन्त्री खतिवडाले आफूले जग बसालेर बिदाइ भए पनि त्यसलाई निरन्तरताको जिम्मेवारी कर्मचारीमा रहेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडा साढे दुई वर्ष कार्यभार सम्हालेर बिदा भए । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा आफुले जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै जग बसाल्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन ।